Apple gosipụtara na ọ na-ekepụta ya Street Street | Esi m mac
Ọnwa ole na ole gara aga ha malitere ịgbasa foto nke ugbo ala ndi nwere otutu kamera n’elu na ọ dị ka ihe niile ọ na-egosi na ha bụ nke Apple. Laterbọchị ole na ole ka e mesịrị, anyị malitere ịhụ foto ndị ọzọ nke ụgbọ ala ndị ọzọ nwere otu usoro igwefoto dị n'elu, dị ka nke anyị nwere ike ịhụ n'elu nke ọkwa a. Asịrị banyere Apple Street Street nwere ike ibugharị, mana dịka ọ dị na mbụ, Apple ekwenyeghị ma ọ bụ gọnahụ ebumnuche ndị ahụ. Mana ekpughere ya na ikekwe Apple nwere ike ịrụ ọrụ n'ụgbọala na-anya onwe ya.
N’ọnwa gara aga 9to5Mac gosipụtara na Apple na-emepe nchekwa data nke ya, na-agbakwunye onyonyo 3D nke n'okporo ámá. N'ikpeazụ Apple gosipụtara na ọ na-arụ ọrụ na ịmepụta nchekwa data nke ihe oyiyi n'okporo ámá site na isi obodo, dịka Google nyere anyị ọtụtụ afọ na ọrụ ya na Street Street. Na weebụsaịtị Apple anyị nwere ike ịgụ:
Apple nwere ugbo ala gburugburu ụwa na-achikota data nke a gha eji iji melite oru Apple Maps. A ga-ebipụta ụfọdụ n'ime ozi a na mmelite n'ọdịnihu na ọrụ Apple Maps.
Anyị na-etinye aka na nzuzo nke ndị ọrụ mgbe anyị na-anakọta data a, yabụ ihe onyonyo niile na-egosi akara akwụkwọ ikike ma ọ bụ ihu ndị mmadụ ga-acha na usoro tupu mbipụta ya.
Iji mepụta ọrụ eserese ngosi na-egosi n'okporo ámá dịka nke Google nwereworị ya na ọrụ Street View, ana m ewere ya n'efu na akụ na ụba Apple nwere ike ịrara nye ihe ọzọ. Ọ gwụla ma ị na-eme atụmatụ itinye ego niile ị na-eme n'ụzọ ọzọ. Ma o doro anya na Apple maara otu na ihe kpatara ya ji enwe mmasị na ego ya na ọrụ Maps ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple kwenyere na ọ na-eke ya Street Street
#sorteoHazeOver Anyị na-enye pụọ 5 Koodu nke ngwa a